အဆိုပါအမျိုးသမီးသြစတြေးလျပွင့်လင်းဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲ 1974 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့် 1974-78 ကနေတစ်ဦးကို 54-ပေါက်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 1978 tourney သို့သော်တစ်ဦး 72-ပေါက် tourney အဖြစ် 1994 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာဖြစ်ရပ်သည်အထိနောက်ဆုံးတစျခုဖွစျသညျ။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲဂေါက်သီးသြစတြေးလျတို့ကဆန္ဒပြခြင်းနှင့်သြစတြေးလျ Ladies ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးရိုက် (ALPG) ခရီးစဉ်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ The Lady ဥရောပခရီးစဉ်သည် 2000 ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ် cosanctioning စတင်ခဲ့ပြီးနှင့် 2012 နောက်ပိုင်းကလည်းတစ်ဦး LPGA Tour ပြိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။
Jin ကလူငယ်တဦးဖြစ်သူကို 69 ၏ပတ်ပတ်လည်နှင့်အတူပိတ်သုံးလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာ LPGA Tour ပြေးသမား-up, Hyejin Choi သုံးခုရှေ့ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒါက 14-အောက်မှာ 274. မှာကိုလက်စသတ်သောသူတဦးဖြစ်သူကိုများအတွက်အနိုင်ရဒုတိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ha Na ဂျန်, သုံးလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ရရန်အတွက်ပြိုင်ပွဲသူမ၏သာ Sub-70 ပတ်လည် 69 ၏နောက်ဆုံး-ပတ်ပတ်လည်ရမှတ်ပစ်ခတ်ကြသည်။ ဂျန် (ကတန်းတူ-73 သင်တန်းခဲ့) 10-အောက်တွင် 282 မှာကိုလက်စသတ်။ အဆိုပါအပြေးသမား-up, နာကို Koerstz Madsen ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ LPGA Tour အပေါ်ဂျန်ရဲ့စတုတ္ထအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဂျပန် Haru Nomura ပြေးသမား-Up လုဒိ Ko ကျော်သုံးရိုက်ချက်များအားဖြင့်သူမ၏အနိုင်ရရှိကူညီပေးနေ, နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ 17 မှတဆင့် 13 ကနေငါးတွင်း၌လေး birdies တစ်ဦး string ကိုပယ်တလည်လည်။ တစ်ဦးကနောက်ဆုံး-ပေါက် bogey တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်း-ပတ်ပတ်လည် 65 carded နှင့် 16-အောက်မှာ 272. Nomura ရဲ့ 65 မှာကိုလက်စသတ်သောသူ Nomura, များအတွက်အရေးမလုပ်ခဲ့နှစ်ခုရိုက်ချက်များအားဖြင့်နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်၏နိမ့်ဆုံးရမှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ LPGA Tour အပေါ်သူမ၏ပထမဦးဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနိုင်ရခဲ့သည်။
LPGA Tour site ကို
18 တွင်း: 62 - Chella Choi, 2014
72 တွင်း: 270 - Karrie ဝက်ဘ် , 2000
1995 ကနေ 2002 ခုနှစျတဆင့်ပြိုင်ပွဲမဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် Yarra Yarra ဂေါက်ကလပ်မှာနှစ်စဉ်ကစားခဲ့သည်။ ထိုကာလထက်အခြား, ထိုပြိုင်ပွဲသြစတြေးလျန်းကျင်သင်တန်းများမှလှည့်လိုက်ပါတယ်။
ဗစ်တိုးရီးယားဂေါက်ကလပ်, 2014 tourney ၏ site ကိုအသုံးပြု 1974 အခြားထင်ရှားတဲ့သင်တန်းများတွင်အသုံးပြုသည့်ပထမဦးဆုံးဂေါက်ကွင်းတော်ဝင်မဲလ်ဘုန်းမြို့တော်ဝင် Adelaide, တော်ဝင်ကင်ဘာရာ, တော်ဝင်ဆစ်ဒနီနှင့် Kingston Heath ပါဝင်သည်ခဲ့သည်။
2012 ခုနှစ်အမျိုးသမီးများနေ့သြစတြေးလျကို Open ပထမဆုံးအမြိုးသမီးမြားရဲ့လိုလားတဲ့ဖြစ်ရပ်တော်ဝင်မဲလ်ဘုန်းမြို့ဂေါက်ကလပ်မှာ Composite သင်တန်းအမှတ်စဥ်အပေါ်ကစားခဲ့သည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲကောင်းတစ်ခုစတင်နိုင်ရန်ချွတ်တယ်: ၎င်း၏အလွန်ပထမဦးဆုံးဆုရှင်, 1974 ခုနှစ်, ဂျပန် LPGA ဒဏ္ဍာရီခဲ့ရေနစ်မြုပ်၏အနာဂတ်ခန်းမ Chako Higuchi ။ နောက်တစ်နေ့နှစ်ခုဆုရရှိသူ - ဂျိုအန်း Carner , Donna Caponi - လည်းရေနစ်မြုပ်၏အနာဂတ်ခန်းမခဲ့ကြသည်။
အနိုင်ရမှပထမဦးဆုံးဩစတြေးလျဂေါက်သီးခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ Stephenson က 1977, ထိုအဖြစ်အပျက်၏စတုတ္ထနှစ်။ အဆိုပါ tourney မိုဃ်းကိုရွာစေအဲဒီနှစ်အားဖြင့် 36 တွင်းမှကိုတိုစေနှင့် Stephenson ကရှုံးနိမ့်ခဲ့သည် Pat Bradley တစ် PLAYOFF ၌တည်၏။
ဤဖြစ်ရပ်ကို 1994 ခုနှစ်တွင် resuscitated ခံခဲ့ရသောအခါ, ဆုရှင် Annika Sorenstam ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့တစ်လိုလားသူဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲအတွက် Sorenstam ရဲ့အလွန်ပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။
Sorenstam ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိုလားသူအောင်ပွဲမှတ်သားသော 1994 ပြိုင်ပွဲကိုလည်းလိုလားတဲ့လှည့်ပြီးနောက် Karrie ဝက်ဘ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးက start ၏ဆိုက်ခဲ့သည်။ ဝက်ဘ်ကနောက်ပိုင်းတွင်အဖြစ်အပျက်စံချိန်ဖြစ်သည့်ယင်းပြိုင်ပွဲကိုငါးကြိမ်အနိုင်ရခဲ့သည်။
ဝက်ဘ်က, 2007-08, နှင့် Yani Tseng 2010-11 အတွက်တစ်ခုတည်းသော Back-To-ပြန်ချန်ပီယံဖြစ်ကြသည်။
Catriona မဿဲ၏ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနိုင်ရရှိ 1996 WAO မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
လုဒိ Ko, အချိန် 15 နှစ်အရွယ်အပျော်တမ်း, ပထမဦးဆုံးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ 63 နှင့်အတူ 2013 ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ 18-ပေါက်အမှတ်ပေးစံချိန် (ကျိုးပဲ့ပြီးကတည်းက) သတ်မှတ်ထားသည်။ သူမသည်ထိုနှစ်တွင်တတိယပြီးလေ၏။
(ကို p-အနိုင်ရ PLAYOFF; ရာသီဥတုအားဖြင့် w-ကိုတိုစေ)
ISPS Handa အမျိုးသမီးများနေ့သြစတြေးလျကိုဖွင့်
2018 - Jin ကလူငယ်တဦးဖြစ်သူကို, 274
2017 - Ha Na ဂျန်, 282
2015 - လုဒိ Ko, 283
2014 - Karrie ဝက်ဘ်က, 276
2013 - Jiyai ရှင် 274
2012 - ဂျက်စီကာ Korda-p, 289
2009 - လော်ရာဒေးဗီးစ်, 285
2008 - Karrie ဝက်ဘ်-p, 284
2007 ခုနှစ် - Karrie ဝက်ဘ်က, 278
2006 - ကစားမ
2005 - ကစားမ
2004 - လော်ရာဒေးဗီးစ်, 283
2002 - Karrie ဝက်ဘ်-p, 278
2001 - ဆိုဖီ Gustafson, 276
2000 - Karrie ဝက်ဘ်က, 270
1999 - ကစားမ
1997 - ဂျိန်း Crafter, 279
1996 - Catriona မဿဲ, 283
1995 - Liselotte နျူမန်, 283
Qantas တို့သြစတြေးလျ Ladies Open ကိုအလိုတော်
1979-1993 - ကစားမ
1978 - ဒက်ဘီ Austin, 213
1977 - ဇန်နဝါရီ Stephenson က-wp, 145
1975 - ဂျိုအန်း Carner, 228
သေတမ်းစာသြစတြေးလျ Ladies ပွင့်လင်း
အဆိုပါ LPGA ANA က Inspiration ပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူ
PGA Tour သမိုင်းအတွက် 11 အကြီးမားဆုံးနောက်ဆုံး-က Round တစ်ကျော့ပြန်
ဗြိတိသျှပွင့်လင်း PLAYOFF Format ကို
တစ်ဦး PGA Tour ပြိုင်ပွဲအတွက် Play မှအသက်အငယ်ဆုံးဂေါက်သီး
ဥရောပခရီးစဉ်အပေါ်အဘူဒါဘီ HSBC ကဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
အိုမီဂါဒူဘိုင်းသဲကန္တာရ Classic ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
1996 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: ဒါဟာတစ်ဦး PLAYOFF အတွက် Brooks ရဲ့
27, စိတ်ဝင်စားဖို့ illumination - သို့မဟုတ်ရုံပျော်စရာ - အဆိုပါမာစတာအကြောင်းကို Quotes
ဆစ်ခ်7ဆွယ်ဂိုဏ်း
တစ်ဦး Yule Log in ဝင်ရန် Make လုပ်နည်း
Juz ''5ကုရ်အာန်၏
Hector Lavoe - အကောင်းဆုံးသီချင်းများ
ဘဝသည် Mate ဒါက 8 တိရစ္ဆာန်များ
20 ပြည်သူ့လှောင်ပြောင် Selfies ရိုက်ယူခြင်းဖမ်းမိ
ဘေ့ Tab ကို Read လုပ်နည်း
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: ဗိုလ်ချုပ်ယောဟနျသ Sullivan က
Access ကို 2013 ခုနှစ်တွင်သိမ်းဆည်းရှာဖွေမှုများ
Hector Menelaus သတ်ခဲ့သလား
Lu xun ၏အမွေအနှစ်နှင့်အလုပ်လုပ်
ဤရွေ့ကားဆုံးရှုံးသမ္မတအိမ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတဖန်အဆိုပါပါတီ Nomination Won
တောင်ပိုင်း Polytechnic ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး